Ku Saabsan Better - Shandong Better Motor Co., Ltd.
Better Motor waxaa laga soo saaray aqoon isweydaarsiga gawaarida ee Shirkadda Shandong Fada Group, oo ahayd shirkad ay dowladdu leedahay. Shirkadda Shandong Fada Group waxaa la aasaasay 1976, taas oo horseed u ahayd taageerayaasha elektarooniga ah iyo soo saaraha faakiyuumka ee Shiinaha.
1980-yadii, shirkaddu waxay soo bandhigtay farsamooyin nadiifiyaha faaruqinta ah oo qoyan iyo qalalan oo ka socda shirkadda ELECTROSTAR oo ka socota Jarmalka, kana soo dejisay khadadka wax soo saarka horumarsan ee matoorrada taxanaha ah ee ka kala socda USA, Japan iyo Switzerland. Waxay ahayd shirkaddii ugu horreysay ee Shiinaha oo ku guuleysata soo saar ballaaran ee matoorro taxane ah.
Ka dib markaan wax bartay oo aan ka dhuuxay tiknoolajiyadda casriga ah iyo qalabka in ka badan 10 sano, waxay si guul leh u soo saartay matoor taxane ah oo dhaqe cadaadis sare ah halkii laga keeni lahaa 1999. Bishii Abriil 2000, Longkou Better Motor Co., Ltd ayaa si guul leh loo diiwaan geliyey oo ahayd shirkad gaar loo leeyahay shirkad wadaag ah Bishii Sebtember 2005, shirkaddu waxay magacii u beddeshay Shandong Better Motor Co., Ltd.